स्वस्तिमाको फेरिएको बोली, के यो घमण्ड हो ? - Sutra TV Sutra TV
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले दिएको एउटा अभिव्यक्तिमा बहस जारी छ । युटुबरलाई पत्रकार नै भन्दिन भनेर उनले दिएको अभिव्यक्तिदेखि २० लाख पारिश्रमिक लिने कलाकारले ५० लाख रुपैया उठाउन सक्नुपर्छ भनेर उनले दिएको अभिव्यक्ति चर्चामा रहे । गत साता यी दुई चर्चित बिषयवस्तुले स्वस्तिमा कुन सोचका साथ अघि बढिरहेकी छिन् भन्ने वुझ्न सकिन्छ ।
स्वस्तिमा खड्काले युटुबका पत्रकारलाई पत्रकार नै होइनन् भनेर भनिरहँदा उनले सयौ अन्र्तवार्ता त्यही युटुब च्यानलमा दिइएकी छिन् । स्वस्तिमाले युटुबमा गेम शोदेखि रमाइला कुराकानी, गम्भिर कुराकानी सबै गर्न भ्याएकी छिन् । रमाइलो कुरा मात्र हुने च्यानलमा बढी गएर गफिने स्वस्तिमालाई अहिले तीनै प्रस्तोताहरु पत्रकार होइनन् भन्ने लाग्न थालेको छ ।
के यो स्वस्तिमामा बढेको घमण्ड हो त ? नेपाली फिल्ममा होस्टेल रिटन्र्सबाट उनको आगमन भएको हो । होस्टेल रिटन्र्स रिलिज भएसँग नै स्वस्तिमाले निर्देशक निश्चल बस्नेतसँग बिहे गरेकी थिइन् । स्वस्तिमाले निश्चलसँग बिहे गरेपछि उनको करिअर चम्किएको देखिन्छ ।
निश्चलको साथमा उनले फिल्म खेलिन्, फिल्मको गीतमा मात्र नृत्य गरिन्, म्यूजिक भिडियो पनि खेलिन् ।
उनी अभिनित फिल्म हजार जुनी सम्म रिलिजको क्रममा छ । स्वस्तिमाको फिल्म करिअर हेर्दा उनी सोलो हिट भएको उदाहरण छैन ।
नाई नभन्नु लको सिरिज, छक्का पन्जाको सिरिजमा मात्र उनी हिट छिन् । उनले राम्रो अभिनय गरेको भनेर चर्चा भएको बुलबूल नै चलेन । जबकी, यो फिल्मका निर्माता स्वस्तिमाप्रति नै बढी आशावादी थिए ।
दिपकराज गिरीको टिम, विकासराज आचार्यको टिमबाट उनी बाहिर जान नसकेको देखिएको छ । यसलेगर्दा पनि स्वस्तिमालाई सोलो हिट फिल्म दिनुपर्ने दबाब भने खुबै छ । उनको नामले हिट हुनुपर्ने फिल्म लभ लभ लभ पनि चलेन । यसपछि, बुलबुल पनि चलेन । छक्का पन्जा २, नाई नभन्नु ल ५, जय भोले लगायत चले । यी फिल्म चल्नुको सम्पूर्ण श्रेय त उनलाई जादैन नै ।
नेपाली फिल्ममा अभिनेत्रीहरुले सोलो बलमा पनि फिल्म चलाइरहेका छन् । तर, स्वस्तिमा भने आफ्नो बलले फिल्म चलाउन त सकिरहेकी छैनन् । बरु, उल्टै पारिश्रमिक महंगो लिएको भन्दै अन्य कलाकारको आलोचना गरिरहेकी छिन् ।
जुन युटुबरको साथमा टेकेर उनी आज यो स्थानमा पुगिन्, उनीहरुर्लाइ नै पत्रकार होइनन् भनेर तिरस्कार गर्न थालेकी छिन् । स्वस्तिमालाई यसतो सोचले भोली समस्या पार्दैन र ? कि, निश्चल बस्नेत, विकासराज आचार्य, दीपकराज गिरी लगायतको टिममै फिल्म खेलेर हिट भएको मनोभाव पालिरहने हुन् उनले ।
कलाकार भैसकेपछि लचिलो भएर काम गर्न आवश्यक छ । तर, स्वस्तिमाको यो स्वभावले उनलाई गाह्रो बनाउने विश्लेषण फिल्म क्षेत्रमै हुन थालेको छ ।
आँचलको सपनामा पुष्प
ट्रोलको शिकार वाणी कपुरको बिकिनी, किन गरे उनका फ्यानले आलोचना?
लगातार फ्लपको दौडमा साम्तेन ?
सुकदेव लामाको शब्द-संगीत ‘सुन है साइँली’ (भिडियो सार्वजनिक)